Moto cusub E4: qeexitaanada farsamada, qiimaha iyo wararka ugu waaweyn | Androidsis
Motorola ayaa ugu dambeyn sii deysay jiilka afraad ee qalabka Moto E. Moto E cusub iyo Moto E4 Plus waa aalado dhexdhexaad ah laakiin waxay ujeedadoodu tahay inay soo jiitaan dadka isticmaala dhowr astaamo oo xiiso leh.
Mashruucan waxaan uga hadlaynaa qaabka hoose ee noocyada cusub, Moto E4, oo maraya Faahfaahin farsamo iyo faahfaahinta ku saabsan qiimaha iyo helitaanka. Intaa waxaa dheer, qaybaha hoose waxaad sidoo kale ka heli doontaa a Miiska isbarbardhiga oo leh qaab jiilkii hore, Moto E3.
1 Moto E4 qeexitaan farsamo
2 Moto E4 vs Moto E3 - Kala duwanaanshaha ugu weyn
3 Isbarbardhiga - Moto E4 vs Moto E3
4 Moto E4 qiimaha iyo helitaanka
5 Moto E4 gallery
Moto E4 qeexitaan farsamo
Moto E4 wuxuu matalaa casriyeyn weyn oo laga keenay jiilkii hore, qaabkiisuna wuxuu aad ula mid yahay taxanaha Moto G5. Taleefanka casriga ah ee cusub ayaa leh aluminium aluminium, akhristaha sawirka faraha ee badhanka Home iyo bandhig HD ah 5 inches iyadoo qaraar ah 1280 x ppm X XUMAY.
Dhinaca kale, Moto E4 waxaa ku shaqeeya processor-ka Snapdragon 425 ama 427 (1.4GHz afar geesle) oo lagu daro 2GB oo RAM ah iyo 16 GB oo bannaan oo loogu talagalay keydinta xogta (oo lagu ballaarin karo kaarka microSD).
Sidoo kale, moobaylka ayaa isna keena a 8 megapixel camera gadaal leh autofocus iyo furitaanka F / 2.2, halka kamarada hore ay leedahay qaraar dhan 5 megapixels iyo aperture of F / 2.2.
Dhinaca kale, terminaalku wuxuu leeyahay daaha nano ee biyaha celiya, batari 2800mAh ah iyo warshad ku shaqeysa nidaamka Android 7.1. Waxaa lagu heli doonaa laba midab oo macdan ah, cawl iyo dahab.
Xallinta HD (1280 x 720 pixels)
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 425 ama 427 Bawdada Xuddunta ah 1.4 GHz
Kaydinta 16 GB
Kaamirooyinka 8 megapixel F / 2.2 gadaal - 5 MPx hore
kuwa kale Akhristaha faraha
Cabbirada X x 144.5 72 9.3 mm
Taariikhda sii deynta Juunyo 2017
Qiimaha rasmiga ah 149 euro ama 129.99 doolar
Moto E4 vs Moto E3 - Kala duwanaanshaha ugu weyn
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Moto E4 iyo E3 ayaa laga yaabaa inuu ku jiro naqshadeynta boosteejooyinka, tan iyo jiilkii hore wuxuu lahaa jiif caag ah, sida Moto G4 iyo G4 Plus. Maxaa intaa ka badan, Moto E3 sidoo kale waxaa ka maqan akhristaha faraha processor-keeduna waa 1GHz afar geesle ah oo MediaTek ah, halka RAM uu leeyahay 1GB.
Dhinaca kale, Moto E3 wuxuu leeyahay nidaam hawlgal Android 6.0 Marshmallow, shaashad 5-inch HD leh Corning Gorilla Glass daahan iyo 8MPx (weyn) iyo 5MPx (hore) kamaradaha, sida Moto E4. Halkan waxaan kaaga tagaynaa jadwal isbarbardhig ah oo udhaxeeya labadan terminaal.
Isbarbardhiga - Moto E4 vs Moto E3
Nidaamka hawlgalka Android 7.1 Nougat Android 6.0 Marshmallow
Screen 5 inji IPS LCD 5 inji IPS LCD
Xallinta 1280 x ppm X XUMAY 1280 x ppm X XUMAY
Ilaalinta Nano-daahan biyaha celiya Corning bakhtiyo 3
Kaamirooyinka 8 Megapixels (f / 2.2) + 5 Mpx 8 Megapixels + 5 Mpx
Gacaliye 425GHz afar geesle Snapdragon 427 ama 1.4 6735 GHz Quad Core MediaTek MT1P
Kaydinta 16GB 8GB
Taageerada MicroSD Haa (illaa 128GB) Haa (Ilaa 32GB)
Xuduudaha kala duwan Wi-Fi 802.11 a / b / g / n + Bluetooth 4.2 + GPS leh A-GPS iyo GLONASS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n + Bluetooth 4.0 + GPS leh A-GPS iyo GLONASS
Akhristaha faraha Sí Maya
Cabbirada X x 144.5 72 9.3 mm X x 143.8 71.6 8.5 mm
Peso Gram 150 Gram 140
Taariikhda sii deynta Juun 2017 Julio 2016
Moto E4 qiimaha iyo helitaanka
Moto E4 waxaa lagu iibsan karaa qiimo ah 149 euros ama $ 129,99 laga bilaabo bishan. Dukaamada, Terminalka waxaa laga heli karaa dukaamada waaweyn ee midabbada badan leh, oo ay ku jiraan cawl iyo dahab.
Muuqaal cajiib ah, Moto E4 ayaa hadda lagu sii hayn karaa iyada oo loo marayo Amazon Spain.
Moto E4 gallery
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Moto E4 cusub. Tilmaamaha farsamada iyo qiimaha